Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nhasi vadzokorodza zvakare kuti vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika asiri mugungano rePolitical Actors Dialogue kana kuti Polad apinde mugungano iri kuedza kutsvaga nzira dzekuti nyika ifambire mberi.
VaMnangagwa vataura mashoko aya pamusangano wePolad Summit waitwa muHarare nhasi.
Vachiparura musangano wePolad Summit wanga wakanangana nezvehupfumi, VaMnangagwa vakurudzira mapato asiri muPolad kuti apinde mugungano iri vashande pamwe chete kusimudzira hupfumi hwenyika.
VaMnangagwa vati Polad ndiro rega gungano munyika rinokwanisa kuti vezvematongerwo enyika vagare pasi vachizeya matambudziko akatarisana nenyika.
Hatina kukwanisa kutaura nevatungamiri vemamwe mapato asiri muPolad vakaita saVaUrayayi Zembe vebato reDemocratic Party pamwe naVaDaniel Shumba vebato reUnited Democratic Party.
Sachigaro wekomiti yezvehupfumi VaTrust Chikowora vanotaura nezvakakoshera musangano wanhasi.
Asi mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC, VaNelson Chamisa, vati havasi kuzopinda muPOLAD kana pasina mutongigava asina divi raakarerekera.
VaChamisa vati VaMnangagwa havangakwanise kutungamirira nhaurirano dzePOLAD sezvo vachiti nyaya dzinofanira kuzeyewa dzichisanganisira kusafambiswa zvakanaka kwakaitwa sarudzo dzemuna 2018. VaChamisa vati vatsigiri vavo havasisina chivimbo chekuti nhaurirano pakati pavo naVaMnangagwa dzichabudirira.
Zvichakadai, VaMnangagwa vati hurumende yavo iri kuda kumbopihwa mukana wekugadzirisa zvose zviri kunetsa munyaya dzehupfumi.
Vemabhizumusi vanga vari pamusangano uyu vakurudzirawo hurumende kuti itange yabvunza zvakakwana vari mubhizimisi isati yaita zvinhu pamwe nekuita zvinhu zvinoita kuti mari yemunyika ive nehuremu.
Kunze kwevemapato ezvematogerwo enyika ari muPOLAD, musangano uyu wapindwa nevari munhau dzemabhizimusi vakafanana nevamasangano akaita seZimbabwe National Chamber of Commerce, sangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, sangano reConsumer Council of Zimbabwe, sanagno reUnited Nations Development Program, vebhanga reWorld Bank nevamwe.